သိန်းတစ်သောင်းကံထူးရှင်မိသားစုက ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်အား ကားလာရောက်လှူဒါန်းစဉ် ရွာသူရွာသားတို့၏ ဝမ်းသာကြည်နူးဖွယ် ကြိုဆိုမှုမြင်ကွင်းများ …..
06/06/2019 Yan Naing 0
သိန်းတစ်သောင်းကံထူးရှင်မိသားစုက ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်အား ကားလာရောက်လှူဒါန်းစဉ် ရွာသူရွာသားတို့၏ ဝမ်းသာကြည်နူးဖွယ် ကြိုဆိုမှုမြင်ကွင်းများ ….. ကိုဝင်းကျော်ရဲ့ မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း မြင်းမူမြို့နယ် ထိန်ကန်ကျေးရွာဆိုတာ အညာဒေသမို့ များသောအားဖြင့် အရင်တုန်းက Without ကားတွေစီးကြတယ်..။ တစ်ချို့တစ်ချို့သော ရွာနီးနားက ကျောင်းတွေမှာလည်း သိန်း လေးငါး ခြောက်ဆယ်တန် ကားမျိုးတွေကို စီးကြတယ် Continuous reading
ချစ်သူ ရည်းစား မရှိတဲ့ ၊ တစ်ကိုယ်တည်းသမား တွေက ပိုကျန်းမာကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရ…!
ချစ်သူ ရည်းစား မရှိတဲ့ ၊ တစ်ကိုယ်တည်းသမား တွေက ပိုကျန်းမာကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရ…! ချစ်သူ ရည်းစား မရှိတဲ့၊ တစ်ကိုယ်တည်းသမား ဘဝဟာ ပီးပြည့်စုံခြင်း မရှိပဲ ဟာတာတာကြီး ဖြစ်နေတယ်လို့ သင် ခံစားနေရပါသလား။ တကယ်တော့ ချစ်သူ ရည်းစားထားပီး စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ မကျန်းမမာ Continuous reading
06/06/2019 lin htet 0
ရန်ကုန်မြို့သစ်နှင့် မြို့ဟောင်းကြားတွင် ရေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း ထည့်သွင်းတည်ဆောက်မည်
ရန်ကုန်မြို့သစ်နှင့် မြို့ဟောင်းကြားတွင် ရေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း ထည့်သွင်းတည်ဆောက်မည် ရန်ကုန်မြို့သစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီလီ မိတက်f(NYDC)မှ အကောင် အထည် ဖော်မည့် ရန်ကုန် အနောက်တောင် မြို့သစ် စီမံကိန်း(ရန်ကုန်မြို့သစ်)နှင့် ရန်ကုန်မြို့ ဟောင်းအကြား ရေအောက် ဥမင်လိုဏ် ခေါင်းထည့်သွင်း တည်ဆောက် သွားမည်။ ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အ Continuous reading
သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင်မိသားစုမှ မွေးရပ်မြေ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ထံသို့ ကားသွားရောက်လှူတန်း
သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင်မိသားစုမှ မွေးရပ်မြေ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ထံသို့ ကားသွားရောက်လှူတန်း ကိုဝင်းကျော်ရဲ့ မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း မြင်းမူမြို့နယ် ထိန်ကန်ကျေးရွာဆိုတာ အညာဒေသမို့ များသောအားဖြင့် အရင်တုန်းက Without ကားတွေစီးကြတယ်..။ တစ်ချို့တစ်ချို့သော ရွာနီးနားက ကျောင်းတွေမှာလည်း သိန်း လေးငါး ခြောက်ဆယ်တန် ကားမျိုးတွေကို စီးကြတယ် ဆရာတွေအတွက် Continuous reading
KG ကျောင်းသား များ စာမ သင်ရ၊ စာမေးပွဲ မဖြေရ ပါက စာမတတ်တော့ဟု မြန်မာမိဘများက ယူဆ နေကြဟု ဆို ။ ။
KG ကျောင်းသား များ စာမ သင်ရ၊ စာမေးပွဲ မဖြေရ ပါက စာမတတ်တော့ဟု မြန်မာမိဘများက ယူဆ နေကြဟု ဆို ။ ။ ကလေး ငယ်များမှာ ၃ နှစ်မှ ၇ နှစ်အတွင်း ဦးနှောက် မဖွံ့ဖြိုးသေးသဖြင့် အဆို ပါအရွယ်များကို Continuous reading
အိမ်ဝန်း ခြံစည်းရိုး ကိစ္စ အငြင်းပွား ရာ မှ လူသတ် မှု့ဖြစ် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး ။ ။ ။
အိမ်ဝန်း ခြံစည်းရိုး ကိစ္စ အငြင်းပွား ရာ မှ လူသတ် မှု့ဖြစ် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး ။ ။ ။ ငါ့ သရောက်မြို့ ကုလားတဲ ကျေးရွာတွင် အိမ်ဝန်းခြံ စည်းရိုး ကိစ္စ အငြင်းပွား ရာမှ လူသတ်မှု့ဖြစ်ပွား ။ ။ Continuous reading
မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသား အယောက်တစ်သောင်းကို စက်ဘီး လက်ဆောင်ပေးမယ့်သူ…..
မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသား အယောက်တစ်သောင်းကို စက်ဘီး လက်ဆောင်ပေးမယ့်သူ….. မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးလက်ဒေသ ကားလမ်းဘေးတွေမှာ စီတန်းပြီး ကျောင်းကို လမ်းလျှောက်သွားနေကြတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကို မြင်ပြီး သူဒီစိတ်ကူးရခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီနောက် တစ်နှစ်လောက် အကြာမှာ ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးကိုသူ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စင်ကာပူနဲ့ တရုတ်ကို ခရီးတွေထွက်ခဲ့ပြီးနောက် သူ့အကူညီပေးရေးစီမံကိန်းဟာ တစထက်တစ Continuous reading
လက်တွဲဖို့ထိ ရည်ရွယ်ထားရင် ချစ်သူကို မဖြစ်မနေ မေးသင့်တဲ့မေးခွန်း
လက်တွဲဖို့ထိ ရည်ရွယ်ထားရင် ချစ်သူကို မဖြစ်မနေ မေးသင့်တဲ့မေးခွန်း လူတစ်ယောက်ကို လက်တွဲဖို့အထိ ရည်ရွယ်ပြီး အတည်တွဲမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးမေးမြန်းသင့်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေကို မေးပြီးမှသာ လူတစ်ယောက်ကို အတည်တွဲကြပါလို့ အမျိုးသမီးလေးတွေကို အကြံပေးချင်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေကတော့ … ၁။ ရှင့်ရဲ့ ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုက ဘယ်လိုလဲ။ Continuous reading
အဆိုတော်အဲလက်စ်ရဲ့ သမီးနဲ့တွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလိုက်တဲ့ Dee Dee Burmese Vlog….
အဆိုတော်အဲလက်စ်ရဲ့ သမီးနဲ့တွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလိုက်တဲ့ Dee Dee Burmese Vlog…. မြန်မာနိုင်ငံရှိ နာမည်ကျော် social influencers တွေထဲကမှ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Dee Dee Burmese Vlog ဟာ ချစ်သူအသစ်စက်စက်လေးကို အတိအလင်းကြေညာလိုက်ပါပြီ။ သူ့ချစ်သူကတော့ တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် ပေါ့ပ်အဆိုတော်ကြီး အဲလက်စ်ရဲ့ Continuous reading